खनाल–नेपाल समूहको अबको बाटो कता ? Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
खनाल–नेपाल समूहको अबको बाटो कता ?
ओलीको जालझेलमा नपर्ने, नयाँ पार्टी खोल्ने पक्षमा खनाल–नेपाल समूह
काठमाडौं : गत आइतबार प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताको आह्वानसहित वक्तव्य निकाले।
वक्तव्यमा एमालेलाई २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्कन तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर, यसका लागि सर्त राखिएको छ– संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ताको।
एमालेको असन्तुष्ट समूह वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहलाई लक्षित गरी आह्वान गरिएको वक्तव्यले एमालेमा एकताको आधार तयार पारेको जस्तो भान हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीसमेत आफ्नो अडानबाट झुकेर एकताको प्रस्ताव अघि बढाएको देखिन्छ। तर, खनाल–नेपाल समूहले यसबाट एकताको आधार तयार हुने बाटो देखेको छैन।
एमालेका सांसद तथा खनाल–नेपाल समूहका नेता मेटमणि चौधरी यो वक्तव्यका आधारमा पार्टी एकता हुने कुनै आधार नरहेको बताउँछन्।
नेता चौधरी अध्यक्ष ओली आफू संकटमा परेको अवस्थामा संकट टार्न अनेक जालझेल गर्ने र पासा खेल्ने गरेको विगत सम्झन्छन्। यो पनि त्यसैको निरन्तरता भएको नेपाल पक्षको बुझाइ छ।
‘अहिले पनि संवैधानिकरूपमा कमजोर भइसकेको अवस्थामा संसद पुनःस्थापना हुने अवस्था देखेपछि प्रधानमन्त्री पद गइहाल्छ भनेर त्यो पासा फालेका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा हामी सचेत छौं। यसको कुनै अर्थ छैन हुँदैन।’
‘शाब्दिक अर्थ र नियतमा नै झेल’
ओलीले एकतामा नाममा शब्दमा खेल्न खोजेको र नियतमा नै झेल रहेको निष्कर्ष नेपाल पक्षको छ।
खनाल–नेपाल समूहकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री ओलीको नियतमाथि नै प्रश्न गर्छिन्।
‘साँच्चै नेकपा एमालेको एकताको लागि गरिएको भए एकता गर्नुपर्ने दुई पक्ष बीचमा सहमति गरी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहितको संयुक्त वक्तव्यको रूपमा आउथ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘एकतर्फी घोषणा गरेर एकता गर्न खोजिएको होइन। झुक्याउन र अलमलाउन मात्र हो भन्ने स्पष्ट छ।’
खनाल–नेपाल समूहले वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४ मा रहेको अदालतमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ताको विषय उठान हुनुलाई षड्यन्त्रको रूपमा लिएको छ। हस्ताक्षर फिर्ता लिएको अवस्थामा पार्टीले कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउने उल्लेख छ।
‘अदालतमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ताको विषय गम्भीर छ। यो कसले फिर्ता लिने ? फिर्ता लिने पक्षसँग यो वक्तव्य जारी गर्न सहमति वा संवाद आवश्यक पर्ने होइन र ?’ नेत्री झाँक्री प्रश्न गर्छिन्, ‘लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संविधानलाई क्रियाशील गराउन तथा संसद पुनःस्थापना गर्न हामी अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थियौं। हामीहरूले यसको सुनिश्चिताबिना हस्ताक्षर फिर्ता लिने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन।’
नेता चौधरी ओलीले शाब्दिकरूपमा समेत झेल गरेर एकता आह्वानको नाटक गरेको बताउँछन्।
‘अहिले संकट आएपछि यो फन्डा प्रयोग गरिएको हो। हामीले जेठ २ मा फर्कनुपर्छ भनिरहेका छौं। उनले जेठ ३ लाई आधार मानेका छन्,’ चौधरीले उकेरासँग भने, ‘१२ घण्टाको मात्र फरकमा एमाले पार्टी अस्तित्वमा रहेको र एकता भएको अवस्था हो। यसमा धेरै ठूलो अन्तर हो नि। हामीले जेठ २ भनेको पार्टी एकता हुनुअघिको अवस्था हो जेठ ३ भनेको पार्टी एकतापछिको अवस्था हो। यहाँ शब्दसँग पनि खेल्न खोजेको स्पष्ट छ।’
वक्तव्यमा पार्टी एकता चाहनेहरूको मनोभावना भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको र नगरिनु समेत शाब्दिकरूपमा ठूलो झेल रहेको उनलाई लाग्छ।
‘नेकपा एमालेको पार्टी केन्द्रीय सदस्यलाई आह्वान गरिएको होइन। जो फागुन २३ (अदालतको फैसलापछि नेकपा विभाजनको अवस्था) पछि थपिएका छन् नि यिनीहरूलाई आधार बनाएर भन्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण उनले शब्दबाट पनि खेल्न खोजेका छन्। शाब्दिकरूपमा र नियतको हिसावले पनि त्यो ठिक छैन। प्रत्येक पटक संकटमा परेको अवस्थामा ओलीले यस्ता हथकण्डा अपनाउने गर्छन्। यो प्रस्तावलाई हामीले त्यहीरूपमा लिएका छौं।’
योगेशले देखेको एकताको आधार
नेपाल पक्षका अधिकांश नेताले अध्यक्ष ओलीको आह्वानलाई अप्ठ्यारो अवस्था आएपछि प्रयोगका रूपमा लिएका छन्। तर, नेता योगेश भट्टराईले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
उकेरासँगको कुराकानीमा थप अभिव्यक्ति दिन नचाहेका उनले सामाजिक सञ्जालमा भने वक्तव्यले छलफललाई पुनः निरन्तरता दिन बाटो खुलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘पार्टीका जिम्मेवार नेता कमरेडहरू सम्मिलित कार्यदलले स्पष्ट गर्नु पर्ने र मिलाउनु पर्ने थप विषयलाई समाधान गर्ने छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा सबै सम्भावनालाई ख्याल गर्दै र मूलतः संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरता र पार्टी एकताको खातिर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘सारमा अध्यक्षको वक्तव्यले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबीच सार्थक संवाद हुनेछ र नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण राख्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्दछु। हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाट नै सुरु हुन्छ।’
उसो त उनी पार्टी एकताको पक्षमा रहने भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नबाट पछि हटेका थिए। तत्पश्चात नेपाल पक्षका कतिपय निर्णयमा तटस्थ बस्दै आएका छन्।
नेपाल पक्षमा लागेर अध्यक्ष ओलीको चर्को आलोचना गर्दै आएका उनी पछिल्लो नरम प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिटमा सांसद सर्वोच्चमा भौतिकरूपमा उपस्थित भएर हस्ताक्षरसहित निवेदन दिँदा उनी भने यसमा सहभागी भएका थिएनन्।
खनाल–नेपाल समूहको अबको बाटो : नयाँ पार्टी गठन
सम्भवतः एमाले ओली र नेपाल पक्षबीच पार्टी एकता हुने वा नहुने निर्णायक मोड आएको नेताहरू बताउँछन्। तर, यही अवस्थामा पार्टी एकता सम्भव हुने देख्दैनन्। अध्यक्ष ओलीले आह्वान गरेको वक्तव्यमा नेपाल पक्ष सहमत हुने सम्भावना देखिँदैन।
नेपाल पक्षको आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै वक्तव्यमा अलमलाउने नियत मात्र रहेकाले एकताको कुनै आधार नरहेको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि अबको बाटो के हुने भन्ने विषयमा भने नेपाल पक्षले कुनै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। पछिल्लो धारणामा समेत अन्तिम अवस्थासम्म पार्टीमा नै रहेर पार्टी एकताका लागि लड्ने र त्यसपछि मात्र वैकल्पिक बाटो रोज्ने उल्लेख गरेको छ।
कुन अवस्थामा सम्भव छ त अबको एकता ?
सांसद चौधरी नेकपा एमालेलाई एक बनाउने हो भने २०७५ जेठ २ गतेयता अध्यक्ष भएर गरेका असंवैधानिक काम र क्रियाकलाप तथा प्रधानमन्त्रीका रूपमा संविधानविपरीत गरेका गतिविधिका विषयलाई लिएर जनता, पार्टी र कार्यकर्तासँग क्षमायाचना गरेर अब यस्तो कमी कमजोरी गर्ने छैन भनेर सार्वजनिकरूपमा माफी माग्नुपर्ने बताउँछन्। यो अवस्थामा मात्र एकताका लागि सोच्न सकिने उनको भनाइ छ।
‘अहिले सबैभन्दा ठूलो कुरा देश हो। देश जोगाउनुपर्याे। देश जोगाउनका लागि नेपालको संविधान जोगिनुपर्याे। संविधान जोगिनका लागि संविधान एक्टिभ हुनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले हस्ताक्षर गरेर बुझाएका विषय लोकतन्त्र, संविधान र कानुनसँग जोडिएको विषय छ। यो कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुँदैन। ओली एक्लैको लागि हामी त्यता जान सक्दैनौं।’
त्यस्तो अवस्थामा नेपाल पक्षसँग दुई विकल्प रहने नेताहरू बताउँछन्। कि पार्टी एमाले जोगाउने नाममा सहमति गर्ने र अर्को नयाँ पार्टी गठन गर्ने।
पहिलो विकल्पमा जाँदा ओलीका अपराधको भागिदार र साक्षी रहेर बन्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यो विकल्पमा जाने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘दुईमध्ये थोरै मेहनत गरेर विद्रोह गरेर ओली बाहेकको विशाल र एकीकृत प्रकारको पार्टी बनाउने दोस्रो विकल्प नै उपयुक्त हो,’ सांसद चौधरी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीजस्ता साना पार्टीसँग एकता गर्ने र नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव समूहसँग चुनावी एकता गरेर ओलीको पार्टीलाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी हराउनु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो।’
२०७८ जेठ २५ गते ०:२६ मा प्रकाशित